.လေဖြတ်နေသော ဖခင်ကြီးကိုစောင့်ရှောက်ရင်း အနုပညာအလုပ်တွေစတင်လုပ်ကိုင်တော့မယ့် သမီးဖြစ်သူ သျှင်မင်းသူ. – Askstyle
.လေဖြတ်နေသော ဖခင်ကြီးကိုစောင့်ရှောက်ရင်း အနုပညာအလုပ်တွေစတင်လုပ်ကိုင်တော့မယ့် သမီးဖြစ်သူ သျှင်မင်းသူ.
မဂၤလာပါပရိသတ္ႀကီးေရ အႏုပညာအလုပ္ေတြစတင္လုပ္ ကိုင္ေတာ့မယ့္ သ႐ုပ္ေဆာင္ကိုမင္းလွိုင္ရဲ့သမီးေလး သၽွင္မင္းသူအေၾကာင္းေလးကို ပရိတ္သတ္ႀကီးအတြက္ျပန္လည္မၽွေဝလိုက္ပါတယ္။ပရိတ္သတ္ႀကီးေလကိုမင္းလွိုင္ကိုေတာ့ဟာသသ႐ုပ္ေဆာင္အျဖစ္ လူသိမ်ားတဲ့ျပည္သူအခ်စ္ေတာ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။
အသံေလးဝဲတဲဝဲတဲနဲ႔မြန္ႀကီးလို႔ေခၚေဝၚၾကပါတယ္ကိုမင္းလွိုင္ဟာက်ရာဇာတ္႐ုပ္ကိုပီျပင္စြာသ႐ုပ္ေဆာင္နိုင္တဲ့သ႐ုပ္ေဆာင္ေကာင္းလည္းျဖစ္ပါတယ္အႏုပညာကိုခ်စ္ျမတ္နိုးတဲ့သ႐ုပ္ေဆာင္ကိုမင္းလွိုင္ကအခုဆိုရင္ေလျဖတ္ေဝဒနာေၾကာင့္ မွတ္ဉာဏ္ေပ်ာက္ဆုံးသြားတဲ့ ဖခင္ႀကီးကိုအရိပ္တစ္ၾကည့္ၾကည့္နဲ႔ေစာင္ေရွာက္ေနရတယ္လို႔သမီးေလးသၽွင္မင္းသူကဆို လာပါတယ္။
အခုဆိုရင္သမီးေလးသၽွင္မင္းသူကအႏုပညာအလုပ္ေတြကိုစတင္လုပ္ကိုင္ေတာ့မယ္လို႔ပရိတ္သတ္ႀကီးကိုအသိေပးလာပါတယ္။၂၂ရက္ေန႔ကလည္းသူမရဲ့လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာေပၚမွာအျဖဴေရာင္သကၠရာဇ္ဆိုတဲ့ Forever Group Co.,Ltd ကရိုက္ကူးဇာတ္ကားတြင္လည္းပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းအသိေပးလာပါတယ္။သ႐ုပ္ေဆာင္ေအာင္ျမင့္ျမတ္၊ဘုန္းဆက္သြင္တို႔ပါဝင္ၿပီးဝါရင့္သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားစြာပါဝင္ထား တဲ့ဇာတ္လမ္းတြဲမွာပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္မွာျဖစ္ပါတယ္။သ႐ုပ္ေဆာင္ကိုမင္းလွိုင္ကိုအားေပးသလိုသမီးေလးသၽွင္မင္းသူကိုအားေပးမယ္လိုေမၽွာ္လင့္ပါတယ္ ။အစမွအဆုံးဖတ္ေပးေသာ ပရိတ္သတ္ႀကီးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္
မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရေ အနုပညာအလုပ်တွေစတင်လုပ် ကိုင်တော့မယ့် သရုပ်ဆောင်ကိုမင်းလှိုင်ရဲ့သမီးလေး သျှင်မင်းသူအကြောင်းလေးကို ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက်ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ပရိတ်သတ်ကြီးလေကိုမင်းလှိုင်ကိုတော့ဟာသသရုပ်ဆောင်အဖြစ် လူသိများတဲ့ပြည်သူအချစ်တော်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
အသံလေးဝဲတဲဝဲတဲနဲ့မွန်ကြီးလို့ခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်ကိုမင်းလှိုင်ဟာကျရာဇာတ်ရုပ်ကိုပီပြင်စွာသရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့သရုပ်ဆောင်ကောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်အနုပညာကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့သရုပ်ဆောင်ကိုမင်းလှိုင်ကအခုဆိုရင်လေဖြတ်ဝေဒနာကြောင့် မှတ်ဉာဏ်ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ ဖခင်ကြီးကိုအရိပ်တစ်ကြည့်ကြည့်နဲ့စောင်ရှောက်နေရတယ်လို့သမီးလေးသျှင်မင်းသူကဆို လာပါတယ်။
အခုဆိုရင်သမီးလေးသျှင်မင်းသူကအနုပညာအလုပ်တွေကိုစတင်လုပ်ကိုင်တော့မယ်လို့ပရိတ်သတ်ကြီးကိုအသိပေးလာပါတယ်။၂၂ရက်နေ့ကလည်းသူမရဲ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာအဖြူရောင်သက္ကရာဇ်ဆိုတဲ့ Forever Group Co.,Ltd ကရိုက်ကူးဇာတ်ကားတွင်လည်းပါဝင်သရုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်းအသိပေးလာပါတယ်။သရုပ်ဆောင်အောင်မြင့်မြတ်၊ဘုန်းဆက်သွင်တို့ပါဝင်ပြီးဝါရင့်သရုပ်ဆောင်များစွာပါဝင်ထား တဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။သရုပ်ဆောင်ကိုမင်းလှိုင်ကိုအားပေးသလိုသမီးလေးသျှင်မင်းသူကိုအားပေးမယ်လိုမျှော်လင့်ပါတယ် ။အစမှအဆုံးဖတ်ပေးသော ပရိတ်သတ်ကြီးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်